နောက်တခါ အအေးဗူးတွေ ဘီယာဗူး တွေဖောက်တော့မယ်ဆိုရင် ဒီအချက်ကိုမဖြစ်မနေသတိထားပါ - ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ)
Home > Health > နောက်တခါ အအေးဗူးတွေ ဘီယာဗူး တွေဖောက်တော့မယ်ဆိုရင် ဒီအချက်ကိုမဖြစ်မနေသတိထားပါ
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) 10:15 AM Health
[Zawgyi] ဖြင့်ဖတ်ရန် အသက်ကိုဉာဏ်စောင့်တယ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းသင့်အနေနဲ့မဖြစ်မနေသိထားသင့်ပါတယ်တခါတလေ အင်တာနက်သုံးနေရင်းနဲ့ရူးကြောင်ကြောင်သတင်း တွေ့ဖူးကြမှာပါ။ ဘယ်လိုမျိုးတွေလည်းဆိုတော့ မိသားစု အကုန်လုံး soda ဘူးဖောက်သောက်ရင်းအဆိပ်သင့်သလိုဖြစ်ပြီးသေသွားတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းလိုမျိုးပေါ့။
ဒါပေမယ့် အခုပြောပြချင်တာက တကယ်သေနိုင်လား?မသေနိုင်ဘူးလား?မသေဘူးဆိုရင်ကောဘယ်လို
ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်လည်း? ဘယ်လိုရှောင်ကျဉ်သင့်သလည်း?ဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခုလောက်မေးကြည့်ချင်ပါတယ်။ရိုးရိုးသားသားဖြေကြတာပေါ့။အိမ်ကနေအဝေးရောက်နေတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ သံဘူးနဲ့လုပ်ထားတဲ့ အအေးတွေ၊ဆိုဒါတွေ၊ဘီယာဘူးတွေကိုသောက်တဲ့အခါမှာ ဒီအတိုင်းဖောက်ပြီးတော့ သံဘူးနဲ့ဘဲသောက်ဖြစ်ကြပါသလား?
မဖောက်သောက်ခင်တုန်းက မသန့်ရှင်းမှာစိုးလို့ဆိုပြီး မျက်နှာပြင် တဝိုက်ကို Tissue နဲ့သုတ်မိကြပါသလား?အဲ့လောက်နဲ့သန့်ရှင်းသွားပြီလို့ထင်လိုက်ပါသလား? ကဲ အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးအတွက် အဖြေတွေကိုအောက်မှာ
သံဘူး တွေအကုန်လုံးကို စက်ရုံ ကနေထုတ်လိုက်ပြီဆိုကတည်းက ပလတ်စတစ်တွေနဲ့ထုတ်ပိုးထားခဲ့ပါတယ်။
ဘာလို့လည်းဆိုတော့ အခြား ဖုန်တွေ အညစ်အကြေးတွေမတက်နိုင်အောင်ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအနေအထားအတိုင်းဘဲ စူပါမားကတ်တွေကိုပို့ဆောင်ပါတယ်။သံဘူးတွေဟာ စူပါမားကတ်တွေရဲ့ အရောင်းစင်တွေမှာ
ရက်ပေါင်းများစွာ ရှိနေတာကြောင့် အချို့သောဖုန်တွေတက်နေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် မသောက်ခင်မှာသန့်ရှင်းရေး
လုပ်ပေးတာအကောင်းဆုံးပါဘဲ။ ဒါပေမယ့် အမှန်တကယ်ကတော့ သံဘူးတွေအရမ်းညစ်ပတ်နေလို့ဆိုပြီး ဆပ်ပြာမှုန့်တွေသုံးပြီးတိုက်ချွတ်ဆေးကြောတာကတော့ လုံးဝမလိုအပ်တဲ့နည်းလမ်းဘဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်ပါ၊ နောက်တစ်ခါ သံဘူးတွေကိုဖွင့်သောက်တော့မယ်ဆိုရင်အခုပြောမယ့်အချက်လေးတွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးပါ။
– သံဘူးကိုသန့်ရှင်းပေးပါ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ စတိုးဆိုင်မှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဘယ်အချိန်ထဲကသိမ်းထားတယ်ဆိုတာကို သင်မသိနိုင်လို့ပါဘဲ။
– Tissue သုံးမယ်ဆိုရင်လည်း တစ်ခုသိထားရမှာက Tissue က ဖုန်တွေကိုဘဲဖယ်ရှားပေးနိုင်တာပါ။ပိုးတော့မသတ်ပေးနိုင်ပါဘူး။
– သံဘူးက ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အနေအထားနဲ့ရှိနေသလားဆိုတာကိုသေချာစစ်ဆေးပါ။ သံချေးတက်နေလား?ပျက်စီးနေလား?ပိန်ရှုံ့နေသလား?
– သံဘူးဟာဖောင်းကြွနေတယ်ဆိုရင်တော့ မသင့်တင့်တဲ့ ပိုးသတ်နည်းကိုအသုံးပြုထားတာကြောင့်ညစ်နွမ်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍များ သံဘူးရဲ့ဘေးမှာ အပေါက်သေးသေးလေးတွေရှိနေတာကြောင့်ဆိုရင်လည်း
– ပျက်စီးနေတယ်ဆိုရင်တော့ အတွင်းပိုင်းကအရာတွေဟာအရည်တွေနဲ့သတ္ထုတွေကိုပေါင်းစပ်သွားစေနိုင်
နောက်ဆုံးပြောပြချင်တာကတော့ အကြံဉာဏ်ရိုးရိုးလေးတစ်ခုပေးချင်ပါတယ်။ သင်ကိုယ်တိုင်လည်း အင်တာနက်မှာရှာဖွေတွေ့ရှိသမျှကိုအလုံးစုံယုံစရာမလိုပါဘူး။ အခုအကြောင်းအရာလည်းအပါအဝင်ပေါ့။ဒါပေမယ့် တစ်ခုတော့
စဉ်းစားကြည့်ပါ။ သင်ကိုယ်တိုင်ကကို အဲ့ဒီသံဘူးတွေဟာစတိုးဆိုင်တွေ၊စတိုခန်းတွေထဲမှာဘယ်လိုသိမ်းဆည်းခံထားရသလည်းဆိုတာကိုမသိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အသုံးမပြုခင်မှာ သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပြီးမှသောက်သုံးတာအကောင်းဆုံးပါဘဲ။ နောက်တစ်နည်းအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ တခြားပုလင်းထဲ(သို့)ခွက်တခုခုထဲကိုတဆင့်ပြောင်းလဲပြီးမှ သောက်သုံးတာလည်းအကောင်းဆုံးဘဲဖြစ်ပါတော့တယ်။
နောကျတခါ အအေးဗူးတှေ ဘီယာဗူး တှဖေောကျတော့မယျဆိုရငျ ဒီအခကျြကိုမဖွဈမနသေတိထားပါ
[Unicode]ဖတျရနျ အသကျကိုဉာဏျစောငျ့တယျဆိုတဲ့စကားအတိုငျးသငျ့အနနေဲ့မဖွဈမနသေိထားသငျ့ပါတယျတခါတလေ အငျတာနကျသုံးနရေငျးနဲ့ရူးကွောငျကွောငျသတငျး တှဖေူ့းကွမှာပါ။ ဘယျလိုမြိုးတှလေညျးဆိုတော့ မိသားစု အကုနျလုံး soda ဘူးဖောကျသောကျရငျးအဆိပျသငျ့သလိုဖွဈပွီးသသှေားတယျဆိုတဲ့ သတငျးလိုမြိုးပေါ့။
ဒါပမေယျ့ အခုပွောပွခငျြတာက တကယျသနေိုငျလား?မသနေိုငျဘူးလား?မသဘေူးဆိုရငျကောဘယျလို
ဆိုးကြိုးတှဖွေဈနိုငျလညျး? ဘယျလိုရှောငျကဉျြသငျ့သလညျး?ဆိုတာမြိုးတှဖွေဈပါတယျ။တဈခုလောကျမေးကွညျ့ခငျြပါတယျ။ရိုးရိုးသားသားဖွကွေတာပေါ့။အိမျကနအေဝေးရောကျနတေဲ့အခါမြိုးတှမှော သံဘူးနဲ့လုပျထားတဲ့ အအေးတှေ၊ဆိုဒါတှေ၊ဘီယာဘူးတှကေိုသောကျတဲ့အခါမှာ ဒီအတိုငျးဖောကျပွီးတော့ သံဘူးနဲ့ဘဲသောကျဖွဈကွပါသလား?
မဖောကျသောကျခငျတုနျးက မသနျ့ရှငျးမှာစိုးလို့ဆိုပွီး မကျြနှာပွငျ တဝိုကျကို Tissue နဲ့သုတျမိကွပါသလား?အဲ့လောကျနဲ့သနျ့ရှငျးသှားပွီလို့ထငျလိုကျပါသလား? ကဲ အဲ့ဒါတှအေကုနျလုံးအတှကျ အဖွတှေကေိုအောကျမှာ
သံဘူး တှအေကုနျလုံးကို စကျရုံ ကနထေုတျလိုကျပွီဆိုကတညျးက ပလတျစတဈတှနေဲ့ထုတျပိုးထားခဲ့ပါတယျ။
ဘာလို့လညျးဆိုတော့ အခွား ဖုနျတှေ အညဈအကွေးတှမေတကျနိုငျအောငျပွုလုပျထားတာဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီအနအေထားအတိုငျးဘဲ စူပါမားကတျတှကေိုပို့ဆောငျပါတယျ။သံဘူးတှဟော စူပါမားကတျတှရေဲ့ အရောငျးစငျတှမှော
ရကျပေါငျးမြားစှာ ရှိနတောကွောငျ့ အခြို့သောဖုနျတှတေကျနနေိုငျပါတယျ။ဒါကွောငျ့ မသောကျခငျမှာသနျ့ရှငျးရေး
လုပျပေးတာအကောငျးဆုံးပါဘဲ။ ဒါပမေယျ့ အမှနျတကယျကတော့ သံဘူးတှအေရမျးညဈပတျနလေို့ဆိုပွီး ဆပျပွာမှုနျ့တှသေုံးပွီးတိုကျခြှတျဆေးကွောတာကတော့ လုံးဝမလိုအပျတဲ့နညျးလမျးဘဲဖွဈပါတယျ။ဘာဘဲဖွဈဖွဈပါ၊ နောကျတဈခါ သံဘူးတှကေိုဖှငျ့သောကျတော့မယျဆိုရငျအခုပွောမယျ့အခကျြလေးတှကေို ထညျ့သှငျးစဉျးစားပေးပါ။
– သံဘူးက ကောငျးကောငျးမှနျမှနျအနအေထားနဲ့ရှိနသေလားဆိုတာကိုသခြောစဈဆေးပါ။ သံခြေးတကျနလေား?ပကျြစီးနလေား?ပိနျရှုံ့နသေလား?
နောကျဆုံးပွောပွခငျြတာကတော့ အကွံဉာဏျရိုးရိုးလေးတဈခုပေးခငျြပါတယျ။ သငျကိုယျတိုငျလညျး အငျတာနကျမှာရှာဖှတှေရှေိ့သမြှကိုအလုံးစုံယုံစရာမလိုပါဘူး။ အခုအကွောငျးအရာလညျးအပါအဝငျပေါ့။ဒါပမေယျ့ တဈခုတော့
စဉျးစားကွညျ့ပါ။ သငျကိုယျတိုငျကကို အဲ့ဒီသံဘူးတှဟောစတိုးဆိုငျတှေ၊စတိုခနျးတှထေဲမှာဘယျလိုသိမျးဆညျးခံထားရသလညျးဆိုတာကိုမသိနိုငျတဲ့အတှကျကွောငျ့မို့လို့အသုံးမပွုခငျမှာ သနျ့ရှငျးရေးပွုလုပျပွီးမှသောကျသုံးတာအကောငျးဆုံးပါဘဲ။ နောကျတဈနညျးအနနေဲ့ဆိုရငျတော့ တခွားပုလငျးထဲ(သို့)ခှကျတခုခုထဲကိုတဆငျ့ပွောငျးလဲပွီးမှ သောကျသုံးတာလညျးအကောငျးဆုံးဘဲဖွဈပါတော့တယျ။
နောက်တခါ အအေးဗူးတွေ ဘီယာဗူး တွေဖောက်တော့မယ်ဆိုရင် ဒီအချက်ကိုမဖြစ်မနေသတိထားပါ Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 10:15 AM Rating:5[Zawgyi] ဖြင့်ဖတ်ရန် အသက်ကိုဉာဏ်စောင့်တယ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းသင့်အနေနဲ့မဖြစ်မနေသိထားသင့်ပါတယ်တခါတလေ အင်တာနက်သုံးနေရင်းနဲ့ရူးကြောင်ကြောင်သတ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 10:15 AM